Juan Mata oo dalbaday in la taageero dalabkiisa samafalka - BBC News Somali
Juan Mata oo dalbaday in la taageero dalabkiisa samafalka
Image caption Juan Mata ayaa 41 jeer u saftay Spain
Juan Mata ayaa ciyaaryahannada Horyaalka Ingiriiska waydiistay in ay ku taageeraan dalabkiisa ah in hay'addaha samafalka ugu deeqaan 1% ka mid ah mushahaarka ay qaataan.
Lix ciyaartoy ayaa ilaa iyo hadda taageeray ol'olaha ciyaartoygan 29 jirka ah, laakiin ilaa iyo hadda ma jiro ciyaaryahan England u dhashay ama mid kale oo Horyaalka Ingiriiska ka tirsan oo tallaabadaas ku dhaqaaqay.
Si kastaba ha ahaatee Mata ayaa filaya in ay arrintan dhawaan ku soo biiri doonaan ciyaartoy ay ka wada tirsan yihiin Manchester United.
"War wanaagsan oo wayn ayaan hayaa kaas oo ay u badan tahay in uu soo yeeri doono Isniinta," ayuu Mata u sheegay BBC Sport. "Waxaan rajaynayaa in qofkaste uu ku farxi dooono.
Ciyaaryahankan reer Spain ayaa United kaga soo biiray Chelsea isaga oo laga soo siistay 37.1 milyan oo gini, sannadkii 2014kii. Waxaa lagu warramay in uu sannadkii mushahaar ahaan u qaato 7 milyan oo gini.
"Waxaan u arkaa in qaar ka mid ah ciyaartoyda aan wada ciyaarno ay ku soo biiri doonaan dadaalkan" ayuu yiri.
"Kali ah waxaan u baahanahay in aan yeelano wadahadal intan ka gudo wayn oo ka faahfaahsan, si aan ugu sharaxo waxa aan wadno".
Mats Hummels oo difaaca uga dheela dalka Jermalka iyo naadiga Munich ayaa ahaa qofkii u horreeyay ee Mata ku raaca in uu la baxo 1% ka mid ah mushahaarkiisa.
Intaas ka dibna waxaa ku raaacay Megan Rapinoe iyo Alex Morgan oo xulka qaranka dumarka Maraykanka u ciyaara, Giorgio Chiellini oo Juventus u dheela, Serge Gnabry oo horay Arsenal ugu dheeli jiray iyo Dennis Aogo oo ka tirsan Stuttgart.
Mourinho: United waa kooxda ugu nasiibka xun
"Wakhti yar iyo dulqaad ayaan u baahannahay," wuxuuna Mata intaas ku sii daray "waxaan aad u rumaysanahay in ciyaartoy badan oo caalamka kala joogto ay nagu sii biiri doonaan.
"England-na waxaan rajaynayaa in ay toddobaadka soo socda nagaga soo biiri doonaan".